नेपालमा बन्छ विश्वकै चर्चित घडी, एउटाकाे मूल्य १६ लाख ! « Himal Post | Online News Revolution
नेपालमा बन्छ विश्वकै चर्चित घडी, एउटाकाे मूल्य १६ लाख !
प्रकाशित मिति : २०७४, १३ आश्विन ०८:३९
यति महँगो ब्रान्डेड घडीको फ्याक्ट्रीले नेपालमा जरा गाड्नुको पछाडि भने विशेष कारण छ । सन् २००८ मा दुनियाँकै अग्लो शिखर सगरमाथा चढ्न अमेरिकी घडी उत्पादक कम्पनी कोबोल्ड वाचका संस्थापक माइकल कोबोल्ड पहिलोपटक नेपाल ओर्लिए । उनलाई सगरमाथाको शिखरमा पुर्‍याउन सघाएका थिए, दुई जना नेपाली हिमाल आरोही गाइड नाम्गेल शेर्पा र ल्हाक्पा थुन्डु शेर्पाले । त्यसपछिका दुई वर्ष लगातार माइकल सगरमाथा चढ्न आए । पछिल्लो वर्ष भने उनी श्रीमती अनिता उग्यान (कोबोल्ड)सहित आएका थिए । हंगेरी मूलकी अनिता हिमाल आरोहण पेसामै आबद्ध व्यक्ति हुन्, जसले सगरमाथा बिनाअक्सिजन चढिन् । माइकल, अनिता र अर्का एक जना बेलायती मूलका आरोही सम्मिलित आरोहण दलका गाइड थिए, तिनै शेर्पाद्वय । शिखर पुगेर फर्कंदा कोबोल्ड दम्पतीलाई अपर्झट जोखिम आइपर्‍यो । हिमालको साँघुरो खोँचमा माइकलको अक्सिजन सिलिन्डर गुल्टिँदै तलतिर पुग्यो । यति कठिन अवस्थामा समेत नाम्गेलले हत्तपत्त आफ्नो अक्सिजन सिलिन्डर उनलाई दिए र बचाए । यता बिनाअक्सिजन चढेकी अनितालाई समेत शेर्पाद्वयले धेरै स्थानमा लड्नबाट बचाएका थिए ।
मृत्युको मुखबाट फर्काइदिएको यही गुन तिर्न कोबोल्ड दम्पतीले नेपालमा शेर्पाद्वयका लागि कोबोल्ड ब्रान्डको घडी कम्पनी खोलिदिने निर्णय गरेका हुन् । हिमाल चढाउन जाँदा हरेकपटक शेर्पाहरू मृत्युलाई हत्केलामा लिएर जाने भएकै कारण उनीहरूको जोखिमपूर्ण जीवनको विकल्पका लागि कोबोल्ड दम्पतीले यस्तो उपाय निकालेका हुन् । त्यसपछि चैत ०६८ मा बबरमहलमा ‘मेड इन नेपाल’ लेखिएको कोबोल्डको घडी उत्पादन सुरु भयो । “एभरेस्ट चढ्दा आफूहरूलाई बचाइदिएपछि उहाँहरूले शेर्पा दाइहरूका लागि यो कारखाना खोलिदिनु भएको हो,” कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक नकर्मी भन्छिन् ।
उनीहरूकै नाममा यो कम्पनी नेपालमा खोलिएको थियो । तर, अहिले दुवै शेर्पा यो घडी कम्पनीबाट अलग भइसकेका छन् । ल्हाक्पा थुण्डुले त यो संसारबाटै बिदा लिइसकेका छन् । नौपटक सगरमाथा आरोहण गरेका उनको मंसिर ०७३ मा सगरमाथा नजिकै पर्ने ६ हजार ८ सय १२ मिटर अग्लो हिमाल आमादाब्लाम आरोहणका क्रममा मृत्यु भयो । सहयात्रीको मृत्युपछि अर्का शेर्पा ल्हाक्पाले समेत कम्पनी छोडिदिए । कोबोल्डसँग व्यवसायमा बेमेल भएपछि उनी अलग भएका थिए । यद्यपि, कानुन अनुसार यो कम्पनीका नेपाल साझेदार भने हालसम्म पनि ल्हाक्पा नै हुन् ।
सम्बन्धका आधारमा आधा दशकभन्दा लामो समयदेखि चलिरहेको यो घडी विश्व बजारमा समेत पुर्‍याउन सक्ने हो भने सगरमाथाको देशमा बनेको घडी नाडीमा बाँधिदा विश्वमा नेपालको अलग परिचय स्थापित हुन सक्छ ।
नेपाल साप्ताहिकमा मनबहादुर बस्नेतले लेखेको न्यूज स्टोरी